မြောက်ကိုရီးယား - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ချီတက်ပွဲအတွင်း SLBM အသစ်ကိုပြသခဲ့သည်
မြောက်ကိုရီးယားသည်ရေငုပ်သင်္ဘောဖြင့်ပစ်လွှတ်သည့်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်အသစ် (SLBM) ကိုပြသခဲ့သည်။ ယခုအပတ်တွင်အလုပ်သမားပါတီပါတီညီလာခံအပြီးတွင်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကျင်းပစဉ်ကပြသခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏အစိုးရပိုင်သတင်းအေဂျင်စီဖြစ်သည့် KCNA သတင်းကတိုးတက်သောလက်နက်သည်နိုင်ငံ၏ရန်သူများကိုတားဆီးရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်
မြောက်ကိုရီးယား - Kim Nows နျူကလီးယားလက်နက်တိုးမြှင့်မယ်
ဇန်နဝါရီလ 15, 2021 ဇန်နဝါရီလ 14, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်, ကင်မ်ဂျုံသူ၏တိုင်းပြည်၏နျူကလီးယားလက်နက်အား“ အားဖြည့်” ရန်ကတိပြုထားသည်။ ကိုရီးယားအာဏာပိုင်အလုပ်သမားပါတီ (WPK) ၏ကွန်ဂရက်၏နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်းတွင်အာဏာရှင်သည်စကားပြောခဲ့သည်ဟုနိုင်ငံပိုင်ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ (KCNA) ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယား - စီးပွားရေးစီမံချက်တွင်အားနည်းချက်ရှိသည်ဟုကင်မ်ဝန်ခံ
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်သည် ၈ ရက်မြောက်အလုပ်သမားပါတီပါတီ၏ကွန်ဂရက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန်အစိုးရ၏မူဝါဒများပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က“ နာကျင်စေသောသင်ခန်းစာများ” မှသင်ယူရန်လိုအပ်သည်ဟုကင်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောကွန်မြူနစ်ဂျော့ခ်ျဘလိတ်သည်ရုရှားတွင် ၉၉ နှစ်၌ကွယ်လွန်ခဲ့သည်
ရုရှားသည်အသက်ဆုံးရှုံးမှုများစွာအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းနေသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်ကဆိုဗီယက်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းနှင့် MI6 မှဗြိတိသျှထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်းဂျော့ခ်ျဘလဲခ်သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်ကအသက် ၉၉ နှစ်အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာ။ ။ ရေဒီယိုနားထောင်ခြင်းအတွက်လူကိုမြောက်ကိုရီးယားမှကွပ်မျက်သည်
မြောက်ကိုရီးယား၏အကြီးအကဲကင်မ်ဂျုံအန်းသည်ငါးဖမ်းသင်္ဘောမှူးအားကွပ်မျက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်အစီရင်ခံစာများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် အာရှရေဒီယိုနားထောင်ရန် RFA \_ t နှင့်အခြားတားမြစ်ထားသောနိုင်ငံခြားမီဒီယာများပင်လယ်ပြင်၌ရှိနေစဉ်။ လူ ဦး ရေကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချုပ်ကိုင်ထားသည့်အတွက်မြောက်ကိုရီးယားသည်ပြည်သူများအားပြင်ပသတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ကိုတားဆီးထားသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသည်နိုင်ငံသားများအားအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးပစ္စည်းများကိုမြောက်ကိုရီးယားသို့ပေးပို့ခြင်းကိုတားမြစ်သည့်ဥပဒေသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အကြံပေးအဆိုအရတားမြစ်ချက်ကိုလျစ်လျူရှုလျှင်ဒေါ်လာ ၂၇၀၀၀ ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကျခံရနိုင်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကပြုံယမ်းနှင့်ဆိုးလ်အကြားတင်းမာမှုများကြားမှနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်
အဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံ၏ထက်ဝက်ကျော် ကုလသမဂ္ဂ၏ လုံခွုံရေး “ Kim Jong Un ဦး ဆောင်သောအစိုးရ၏မူဝါဒအရပေါ်ပေါက်လာသောမူဝါဒများအရမြောက်ကိုရီးယားတွင်ဖြစ်ပွားသောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ” ကိုပူးတွဲကြေငြာချက်တစောင်တွင်ကောင်စီကသောကြာနေ့တွင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်။
အီရန်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားသည် FATF မဲစာရင်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်
၏သစ်ပင်နေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ မနေ့ကအဆုံးသတ် ဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကကြေငြာခဲ့သည် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်မြောက်ကိုရီးယားတို့သည်အဖွဲ့အစည်း၏နာမည်ပျက်စာရင်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။ Expediency Council မှအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကမူဥပဒေမူကြမ်းအားအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုကျော်လွှားရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 24, 2020 အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
SecurityWeek ၏အဆိုအရဂျာမန်အစိုးရမှထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများသည် WhatsApp ကဲ့သို့သော messenger အသုံးပြုသူများ၏ encrypted message များကို“ နားထောင်ရန်” ခွင့်ပြုသည့်ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ငွေတောင်းခံလွှာကုန်ဆုံးပါက၎င်းတို့၏အနာဂတ်နှင့်အတိတ်ကမက်ဆေ့ခ်ျများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ရုရှား - ကာကွယ်ရေးကဏ္ North ကိုမြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာများတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်
ယခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်မြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာအဖွဲ့ဖြစ်သော Kimsuky သည်ရုရှားစစ်တပ်နှင့်စက်မှုအဖွဲ့အစည်းများအားတိုက်ခိုက်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရုရှားထုတ်ဝေ Kommersant ဒီသတင်းအချက်အလက်ကဖော်ပြခဲ့သည်အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့သော်အဖွဲ့၏အမည်မှာထူးခြားသည်။
Coronavirus- Kim Jong-Un၊ အိုဘားမားနှင့် Clintons တို့သည် Trump အားအမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေလိုသည်
အောက်တိုဘာလ 3, 2020 အောက်တိုဘာလ 3, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်အပြင်သမ္မတဟောင်းနှစ် ဦး ဖြစ်သည့်ဘားရက်အိုဘားမား၊ ဘီလ်ကလင်တန်နှင့်သူ၏ဇနီး၊ ပထမ ဦး ဆုံးအမျိုးသမီးနှင့် ၂၀၁၆ သမ္မတပြိုင်ဘက်ဟီလာရီကလင်တန်သည်ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အလျင်အမြန်သတင်းများပေးပို့သည့်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ COVID-2016 အတွက်အပြုသဘောဆောင်သောစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နှင့်ပထမဆုံးအမျိုးသမီး Melania Trump တို့အားပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 30, 2020 စက်တင်ဘာလ 30, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသည်မြောက်ကိုရီးယားရေတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောလူအားရှာဖွေရန်အတွက်ရေတပ်သင်္ဘောများစေလွှတ်ခြင်းဖြင့်တင်းမာမှုများကိုမီးမရှို့စေရန်သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသတင်းအေဂျင်စီ KCNA ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုးလ်သည်လှုပ်ရှားမှုများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်သင့်သည်။
Kim Jong Un ကတောင်ကိုရီးယားသားကိုသတ်မှုအတွက်တောင်းပန်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 26, 2020 စက်တင်ဘာလ 26, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
“ အရှက်ကွဲခြင်း” အဲဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူး မြောက်ကိုရီးယားရေတပ်တွင် ၄၇ နှစ်အရွယ်တောင်ကိုရီးယားသားတစ် ဦး အားသတ်ဖြတ်မှုကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ Moon Jae-in ထံပေးပို့သည့်စာတွင်ကင်ဂျုံအွန်ကသူသည်“ စိတ်ပျက်စရာ” မွန်းနှင့်တောင်ကိုရီးယားပြည်သူအားလုံးအတွက်“ အလွန်စိတ်မကောင်း” ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Trump တစ်ချိန်ကမြောက်ကိုရီးယားသံတမန်များအတွက် Rodman ထည့်သွင်းစဉ်းစား
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 21, 2020 စက်တင်ဘာလ 21, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်ယခင်ကဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Dennis Rodman အားမြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။ သမ္မတကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kin Jong-un နှင့်ရင်းနှီးသောခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည်အထူးသဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်များစွာအကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Kim Jong-un သည်စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှအရာရှိ ၅ ဦး အားကွပ်မျက်ခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 14, 2020 စက်တင်ဘာလ 14, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားအကြီးအကဲကင်မ်ဂျုံအန် (Kim Jong-un) ကတိုင်းပြည်၏ဆိုးရွားလှသောစီးပွားရေးအခြေအနေကိုသူမကိုင်တွယ်ဘဲဆွေးနွေးခြင်းအားဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှအရာရှိ ၅ ဦး အားကွပ်မျက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏သတင်းအချက်အလက်သင်တန်းသားများကိုတ ဦး အားဖြင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Kim Jong-un သည်မြောက်ကိုရီးယားစီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှအရာရှိ ၅ ဦး ကိုကွပ်မျက်ခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 12, 2020 စက်တင်ဘာလ 12, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားအထွleader်အမြတ်ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်း ငါးအရာရှိများကွပ်မျက်အမိန့်ပေးခဲ့သည် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသူသည်သူ၏မူဝါဒများကိုမေးခွန်းထုတ်။ ဝေဖန်ခဲ့သည်။ တီသူသတင်းအချက်အလက်များ၏ယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ် နေ့စဉ် NK တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်သတင်းပေါ်တယ်ဟာလျှို့ဝှက်နိုင်ငံတွင်းမှာကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ထားတဲ့သတင်းပေးကွန်ယက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသတင်းပို့တယ်။
စားနပ်ရိက္ခာခွဲတမ်းအတွက်တရုတ် ဦး ဆောင်ပါသလား?
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 9, 2020 စက်တင်ဘာလ 9, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်လကတရုတ်၏“ ဘဝအတွက်သမ္မတ” Xi Jinping၊ မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင်အစာချွေတာရန်အရေးကြီးကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည်။ တရုတ်ခေါင်းဆောင်၏အဆိုအရအစားအစာနှင့်စပ်လျဉ်း။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုဆိုသည်။ သူဟာသူကပြောပါတယ်, တိုင်းပြည်အတွင်းစပါးထုတ်လုပ်မှုတစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ကြီးထွားလာသည်။
အစစ်အမှန်လား၊ အတုလား။ မြောက်ကိုရီးယားမှ Kim Alive & Well ကိုအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်သည်
သြဂုတ်လ 27, 2020 သြဂုတ်လ 27, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဓာတ်ပုံများနှင့်သတင်းများအရသိရသည် တရား ၀ င်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ (KCNA) မှယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည် Kim Jong Un သည်လူသိရှင်ကြားပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤအရပ်မှသူသည်အလွန်ဖျားနာခြင်းနှင့်မေ့မြောနေကြောင်းမကြာသေးမီကကောလာဟလများဖယ်ရှားပစ်။ ကင်မ်သည်အာဏာရကိုရီးယားအလုပ်သမားများပါတီ (WPK) ၏အစည်းအဝေးဥက္ကphotos္ဌဓါတ်ပုံတွင်ပြသခဲ့သည်။
Kim Jong-Un သေပြီလား၊
သြဂုတ်လ 24, 2020 သြဂုတ်လ 24, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင် Kim Jong-un သည်ပြင်းထန်စွာဖျားနာသည်ဟုကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်တောင်ကိုရီးယားသံတမန်တ ဦး ၏ပြောကြားချက်အရ၊ တရားဝင် Chang Song-min သည်ကိုရီးယားသံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်လူသိများသည်။ သူသည်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်း Kim Dae-jung ၏လက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်အစိုးရမှာရှိပါတယ် အစွန်းရောက်အစ္စလာမ်မစ်အုပ်စုများ၏ခေါင်းဆောင်များအများအပြားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည် ဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (FATF) မှနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုတားဆီးရန်။ အာဖဂန်တာလီဘန်၏ဒုတိယခေါင်းဆောင် Mullah Abdul Ghani Baradar နှင့် Sirajuddin Haqqani တို့သည် Haqqani ကွန်ယက် အဆိုပါသပိတ်မှောက်အတွက်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ကြသည်။
SK ထောက်လှမ်းရေး - ကင်ဂျုံအွန်းသည်အစ်မကို NK ၏ဒုတိယနေရာတွင်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 22, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တွင်ရှိသည် မိမိအလုပ်ပိုင်ခွင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွှဲအပ် သူ၏ညီအစ်မကင်ယွန်ဂျင်အားတိုင်းပြည်၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာတောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာအရဖြစ်သည်။ ဥက္ကChairman္ဌကင်ဂျုံအွန်သည်သူ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ 28, 2020 ဇူလိုင်လ 28, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus - မြောက်ကိုရီးယားတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်လက်ခံခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ 26, 2020 ဇူလိုင်လ 26, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသော“ ပထမဆုံး” coronavirus သားကောင်သည်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှအိမ်နီးချင်းတောင်ကိုရီးယားမှတရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်ဟုသတင်းများရရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်၏ရလဒ်အဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားအထွSupreme်အမြတ်ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်သည်အစိုးရအရာရှိများနှင့်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Post Gigs - သင်၏ Online Gig Post ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ငွေပိုမိုရရှိလိမ့်မည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 21, 2020 ဇူလိုင်လ 25, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အကယ်၍ သင်သည်ဒီဇိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူသို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး နှင့်သင်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေလျှင်၊ သင်ဖြည့်နိုင်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖျော်ဖြေပွဲ post။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်းတွင်တင်ခြင်းသည်ငွေရှာခြင်းနှင့်အချို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်းရောင်းအား၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပို။ ပင်ပိုက်ဆံ။ Gig လောကမှလူအများစုကရိုးရိုးရှင်းရှင်းစတင်ထွက်ခွာသွားကြပြီးအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အလုပ်အကိုင်အပြည့်ဖြင့်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Pompeo က US-DPRK အစည်းအဝေးကိုထပ်မံငြင်းဆို
ဇူလိုင်လ 20, 2020 ဇူလိုင်လ 20, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo ကသမ္မတ Donald Trump နှင့်မြောက်ကိုရီးယားအထွSupreme်အမြတ်ခေါင်းဆောင် Kim Jong Un အကြားလာမည့်အမေရိကန်သမ္မတမတိုင်မီထိပ်သီးအစည်းအဝေးအသစ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချလိုက်သည်။ Trump နှင့် Kim တို့သည်စင်္ကာပူ၌ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊
ဇူလိုင်လ 15, 2020 ဇူလိုင်လ 15, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဂျပန်အစိုးရကတရုတ်သည်ရှေ့သို့တွန်းပို့နိုင်ရန်ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် ဒေသ၏ရေထဲမှာပိုင်နက်တောင်းဆိုမှုများနှင့် coronavirus ကူးစက်ရောဂါအသစ်အား၎င်း၏သြဇာကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်များကိုရယူရန်အတွက်နှင့်ဂျပန်နှင့်ဒေသအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Kim-Sister US-DPRK ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိဟုပြော
ဇူလိုင်လ 10, 2020 ဇူလိုင်လ 10, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအစ်မ Kim Yo Jong ကပြောကြားသည် သူမ၏အစ်ကိုသည်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ ဒီနှစ်။ သူမသည်သူမသူမ၏တိုင်းပြည်ပြန်မျှမျှတတဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘဲ Trump ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်တွေ့ဆုံပေးလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်မမြင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ 8, 2020 ဇူလိုင်လ 8, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဆိုးလ်နှင့်တိုကျိုသို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသောအမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးစတီဖင်ဘီဂွန်းကယနေ့ပြောကြားသည် ၀ ါရှင်တန်ကမြောက်ကိုရီးယားအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံရန်စိတ်မ ၀ င်စားပါနှစ်နိုင်ငံအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသောအချိန်တွင်၊ Biegun သည်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၏ denuclearization ကိုဆွေးနွေးရန်တရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
Kim Jong-Un ကတောင်ကိုရီးယားကိုစစ်ရေးအရအရေးယူမှုများရပ်ဆိုင်း
ဇြန္လ 27, 2020 ဇြန္လ 27, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားအထွKim်အမြတ်ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်းကသူ၏ကြေငြာချက်အားတောင်ကိုရီးယားအားကြေငြာခဲ့သည် နိုင်ငံတော်၏သတင်းမီဒီယာများကခေါင်းဆောင်သည်အခြေအနေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကဲဖြတ်ရန်အစီအစဉ်များကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားကအိမ်နီးချင်းသည် ၀ ါဒဖြန့်ချိသူများကိုနယ်စပ်တွင်ဖယ်ရှားခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားကမူနျူကလီးယားနှင့် ပတ်သက်၍ နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဟုပြောကြား
မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နျူကလီးယားခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းအားလုံးကုန်ဆုံးပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Kim Jong Un သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဆွေးနွေးမှုများတွင်တိုးတက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်မိကြောင်းသတင်းများကဆိုသည်။
သင်၏ Blog ကို PDF သို့ဘာကြောင့်ပြောင်းသင့်တာလဲ
ဇြန္လ 25, 2020 ဇူလိုင်လ 29, 2020 Uzair Ahmed	မှတ်ချက် Leave
Adobe မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးထုတ်ကုန်များအကြားဖိုင်များမျှဝေရန်စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးစေခဲ့သည်။ ဖိုင်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုမျှဝြေခင်းသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌အချိန်နှင့်အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းများသည်ကူးပြောင်းမှုကာလအတွင်းမူရင်းပုံစံကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အသုံးပြုသူသည်ဖိုင်များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ရန် PDF နှင့်အတူမူရင်းစာလုံးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပြုပြင်ထားပါသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်နှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကို PDF သို့ပြောင်းလဲလိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်စစ်ရေးအစီအစဉ်ကို DPRK ကဆိုင်းငံ့လိုက်သည်
ဇြန္လ 24, 2020 ဇြန္လ 24, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီလများကမြောက်ကိုရီးယားနှင့်တောင်ကိုရီးယားအကြားဆက်ဆံရေးသိသိသာသာယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့သည် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ပြုံယမ်းသည်နယ်စပ်မြို့ Kaesong ၏အနီးတစ်ဝိုက်တွင်တည်ရှိသောတောင်ကိုရီးယားနှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ပူးတွဲဆက်သွယ်ရေးဌာနချုပ်အဆောက်အအုံကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်သည်။
ဇြန္လ 21, 2020 ဇြန္လ 21, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အပေါ်စစ်အသစ်ပြန်ဖြစ်ပါကအမေရိကန်အားဖျက်ဆီးရန်မြောက်ကိုရီးယားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် ဤကြေညာချက်ကိုမော်စကိုရှိမြောက်ကိုရီးယားသံရုံးမှတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကိုရီးယားစစ်ပွဲအသစ်သည်အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ယူအက်စ်ဟုခေါ်သောအခြားအင်ပါယာကိုအဆုံးသတ်စေလိမ့်မည် ပြုံယမ်းကိုယ်စားလှယ်များကပြောကြားသည်။
ဇြန္လ 17, 2020 ဇြန္လ 17, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
လူ ၈၀၀ ကျော်ကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် stopgap quarantine-စင်တာများတွင် quarantine ထားရှိသည်။ ဒီအရသိရသည် မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာ ၎င်း၏မြောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များကိုဖော်ပြထားသောတောင်ကိုရီးယားသတင်းစာ Daily North Korea မှထုတ်ဝေသည်။ ထုတ်ဝေမှုအရမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသည် coronavirus လူနာများအတွက်ဆေးရုံများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်ပညာရေးဌာနများကိုအသုံးပြုနေသည်။
Freelance Gigs နှင့် News Worldwide သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောနေထိုင်မှုတည်ဆောက်ရန်အတွက်အခမဲ့နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 11, 2020 ဇူလိုင်လ 21, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အများပိုင်သတင်း (CN) နှင့် Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း ပလက်ဖောင်းများသည်စာဖတ်သူများအားသူတို့၏အလွတ်အလုပ်ကိုသတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွင်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည် - အားလုံးသည်အကန့်အသတ်မရှိသောစာဖတ်သူများနှင့်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်စျေးကွက်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ CN နှင့် FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက် သတင်းမီဒီယာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားများဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာရန်ဝေးလံခေါင်သီသောတိုင်းပြည်များ၌အဆင်းရဲဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာဖတ်သူများကိုထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်ခိုင်မာသည့်တိုးတက်မှုမျက်မြင်သက်သေများရှိသည်။
ဇြန္လ 9, 2020 ဇြန္လ 9, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
မြောက်ကိုရီးယားကကြေညာလိုက်ပါတယ် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအကြားရှိ hotlines အပါအ ၀ င်တောင်ကိုရီးယားနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မည်။ တောင်ကိုရီးယားကို“ ရန်သူ” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရေးယူမှုအကြိမ်ကြိမ်တွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်ဟုပြုံယမ်းကပြောကြားခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့တွင်တောင်ကိုရီးယားမှမြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးရုံးသို့ပထမဆုံးပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာအဖြေမရခဲ့ပါ။
Coronavirus - မြေထဲပင်လယ်နိုင်ငံများ၊ မြောက်ကိုရီးယား၊
ဇြန္လ 1, 2020 ဇြန္လ 1, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
coronavirus သစ် (Sars-CoV-84) ကူးစက်မှုကြောင့် ၈၄ ရက်ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် ရောမရှိ Colosseum ရှေးဟောင်းသုတေသနဥယျာဉ်ကိုအများပြည်သူပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် တနင်္လာနေ့မှာ။ "ကျနော်တို့ကသင်္ကေတပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ Colosseum ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနဥယျာဉ်ဒါရိုက်တာ Alfonsina Russo က "ရောမရဲ့သင်္ကေတ၊ အီတလီကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အမှတ်အသား"
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 22, 2020 ဇူလိုင်လ 23, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက် posts ည့်သည်များ၊ ပို့စ်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုသည်အလွန် (အဆတိုးနီးပါး) ကြီးထွားမှုနှင့်အတူတစ်နှစ်ခန့်ရှိနေသည်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းချိုသာပြီးကမ္ဘာ့စျေးကွက်နဲ့ FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက် တိုးပွားလာသောအလွတ်တန်း ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းသူအမြောက်အများကိုငွေပိုမိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနျူကလီးယားသုံးစွဲမှုအစီရင်ခံစာ - စစ်အေးခေတ်ကတည်းကအကြီးမားဆုံးသောအသုံးစရိတ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 15, 2020 မေလ 15, 2020 Christina Kitova	2 မှတ်ချက်
A အစီရင်ခံစာသစ် နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ်ပိန်းမှဖော်ပြချက်အရနျူကလီးယားလက်နက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်သည်စစ်အေးတိုက်ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင်မမြင်တွေ့ရသေးကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ICANW သည်နျူကလီးယားလက်နက်များတားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်အားလိုက်နာရန်နှင့်အပြည့်အ ၀ အကောင်အထည်ဖော်ရန်မြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဌာနချုပ်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာတွင်တည်ရှိသည်။
မေလ 15, 2020 မေလ 14, 2020 Tatiana Higgins	မှတ်ချက် Leave
ပျက်စီးကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့သည် ထွန်းသစ်စစျေးကွက်။ အိမ်မှအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများသည်၎င်းတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ချက်ပြုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်အေးခဲနေသောအစားအစာများကိုပိုမိုမှာယူကြသည်။ သငျသညျဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်စဉ်းစားလျှင်ပျက်စီးခြင်းသို့တင်ပို့ဖို့ဘယ်လိုဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ပျက်စီးနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းကိုမတင်ပို့မီသင်ကထုပ်ပိုးမှုကိုကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်သည်။ အထုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းမှအပူကိုအဝေးထိန်းထားရန်လိုပြီး၎င်းသည်ဆိုးရွားသွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ် ရေကြောင်းဖြေရှင်းချက် အပူချိန် - အထိခိုက်မခံထုတ်ကုန်များအတွက်
ဈေးသက်သာတဲ့ Freelance Gig Marketplace ကဒီမှာပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 15, 2020 ဇူလိုင်လ 23, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Gig ပလက်ဖောင်း (သို့) စျေးကွက်တခုခုတွင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည် - စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ? သင်အမြဲနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် Gig platform တစ်ခုဆိုတော့မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို Gig ပံ့ပိုးပေးသူသို့မဟုတ်စွဲချက်ပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်း, သူတို့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတင်ပြအတွက်သူတို့ကပိုမိုရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေး; ဒါကြောင့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုနားလည်ဖို့ခက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကများသောအားဖြင့်မြင့်မားပြီးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုချင်မှာမဟုတ်ဘူး။
တောင်ကိုရီးယားအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီး Hyunmoo-4 ဒုံးကျည် - ရုရှား Iskander-M နှင့်အဘယ်ကြောင့်တူသနည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 10, 2020 မေလ 9, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တောင်ကိုရီးယားသည် Hyunmoo-4 ဒုံးကျည်ကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို Yonhap News Agency မှရရှိသည်။ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ၏ပြောကြားချက်အရအဆိုပါစစ်ဆေးမှုသည်နိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိ Taeang ကောင်တီတွင်တည်ရှိသော Anheung စမ်းသပ်နေရာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာပြန်ဆိုပါကထို site ၏အမည်မှာ“ မြောက်ပိုင်းမိုးကောင်းကင်၏အုပ်ထိန်းသူကောင်းကင်တမန်” ဟုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆိုလိုသည်။